Fanadihadiana marina momba ny sarimihetsika an'i Netflix 'I care a lot' - Fialam-Boly
Lakozia Maharitra Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Mpahay Nahatratra Ao Amin'ny The News Hafa Manjamaso Teknolojia Ahoana No Iraisam-Pirenena Dia Singam-Bolo
Rosamund Pike's Thriller 'Miahy be aho' dia mbola ao amin'ny lisitra 10 ambony an'i Netflix — Ity ny famerenako ny marina
* Fampitandremana: Mpandroaka madinidinika mialoha *
Raha tianao Gone Girl , avy eo ampaherezo ny masonao amin'ny zava-mahaliana ara-psikolojika farany an'i Rosamund Pike: Miahy an'i Lo aho t . Tonga tao amin'ny Netflix ny sarimihetsika tamin'ny volana lasa teo, ary nahavita nitana toerana tao amin'ny lisitry ny sarimihetsika fandefasana sarimihetsika be mpijery indrindra hatrizay.
Mikarakara be dia be aho Nahazo laza malaza noho ny fitantarany ny tantara izay nahatonga ahy haminavina hatramin'ny farany. Marina raha mieritreritra ianao fa hanao antsitrika lalina any amin'ny kolikoly ao anatin'ny indostrian'ny mpikarakara, ny sary mihetsika 180 feno ary mivadika ho tantara mampihetsi-po momba tranga mangalatra mombamomba ny halatra maha-izy azy.
Ka inona izany Mikarakara be dia be aho momba? Ary mendrika ny fiambenana ve izany? Tohizo ny famakiana ho an'ny fandinihako marina ny sarimihetsika vaovao malaza an'i Netflix.
1. Inona no'Mikarakara be dia be aho'momba?
Aiza no hanombohako? Mikarakara be dia be aho mampahafantatra ny mpijery an'i Marla Grayson (Pike), izay mpiambina notendren'ny fitsarana ho an'ny paroasy antitra am-polony. Ny olana? I Marla dia mampiasa ny rafitra amin'ny alàlan'ny fikendrena ireo mpisotro ronono manankarena tsy manana mpandova velona (serizy AKA) ary avy eo maka ny fananany rehetra.
Rehefa mampandre azy hisokatra ny trano fonenana manampy, dia nitsambikina avy hatrany i Marla fa nanendry an'i Jennifer Peterson (Dianne Wiest). Miorina amin'ny fikarohana nataony, miaina irery i Jennifer ary tsy manana mpikambana ao amin'ny fianakaviana velona, ​​manao azy ho kandidà mety.
Raha ny tokony ho izy, mpamily fiarakaretsaka iray no tonga tao an-tranon'i Jennifer fotoana fohy taorian'ny nitondrana azy tany amin'ny toerana antitra. Raha ny hita dia tsy i Jennifer no nilaza azy. Heveriny fa ny maha-tovovavy kely iray maty ny lefakozatra am-polony taona maro lasa izay, izay midika fa ny mombamomba azy manokana — anisan'izany ny tsy fananany fianakaviana - dia diso.
mpanao heloka bevava: fanjakana mitambatra
Tsy hanome fanomezana be loatra aho, fa rehefa i Peter Dinklage kosa miseho an-tsehatra amin'ny andraikitra tsy hay hadinoina, dia hijanona tsy misy na inona na inona hanafahana an'i Jennifer izy ary hamerina haka ny fananany-na dia midika ho fiarahana miasa amin'ny mpiara-miasa tsy azo inoana amin'ny asa ratsy aza izany.
2. Mendrika ny fiambenana ve izany?
Tsy misy fisalasalana, eny. Tamin'ny voalohany, tsy azoko antoka hoe mankaiza ny sarimihetsika, satria toa nanasongadina paoma ratsy iray (Marla) tamina asa mendrika (fiderana) io. Na izany aza, tsy nankafiziko ilay sarimihetsika satria noheveriko fa fanehoana marina ny maha-mpiambina azy. Fa kosa, nahaliana ahy izany satria ny saiko foana no naminavina ny dingana rehetra.
Amin'ny maha olona efa nahita be ahy - averiko, betsaka - ny sarimihetsika, mahalana no tsy maminavina ny fiafarany na, farafaharatsiny farafaharatsiny, lafin-tantara iray. Tsy azo lazaina izany Mikarakara be dia be aho , hatramin'ny nialan'ny fehin-kevitra tamiko nanozongozona . Tsy ny sarimihetsika ihany no mitazona ahy eo amoron'ny sezako amin'ny fotoana rehetra, fa namela ahy haniry bebe kokoa ihany koa.
Zava-dehibe ny manamarika izany Mikarakara be dia be aho tsy mety amin'ny mpijery amin'ny sokajin-taona rehetra. Misy fiteny maloto (ankoatry ny fitanjahana) izay tsy mety amin'ny tanora, ka aza hadino ny mametraka Cocomelon ao amin'ny efitrano hafa raha toa ka maheno sofina ny kiddos.
Oh, ary i Pike dia nahazo ny Golden Globe ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra amin'ny sary mihetsika (hatsikana na mozika). Mila miteny bebe kokoa ve aho?
Te hanana horonantsary ambony indrindra any Netflix halefa amin'ny boaty fampidirana anao? Kitiho eto .
Mifandraika: Ireo mpankafy an'i Netflix dia tia an'ity fampisehoana zava-misy marina ity ... Momba ny fitsofana fitaratra
andian-tsarimihetsika fahitalavitra superhero tsara indrindra
Sokajy Hoditra Teknolojia Fitiavana Firaisana
fampifanarahana virtoaly sy virgo
sarimihetsika romantika hollywood tsara indrindra
seksi amin'ny efitrano fandriana
fitsaboana voajanahary ho an'ny aretin'ny holatra
sarimihetsika koreana atsimo 2014
sarimihetsika momba ny tantaram-pitiavana sy tantara an-tsehatra